တောင်တွေး မြောက်တွေး ( ၁ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » တောင်တွေး မြောက်တွေး ( ၁ )	7
တောင်တွေး မြောက်တွေး ( ၁ )
Posted by တောတွင်းပျော် on Jul 6, 2016 in Creative Writing, Think Different |7comments
အတွေးက ကိုယ့် ဘာသာခေါင်းထဲမှာပဲရှိနေရင်တော့ဘာပြသ်သနာမှမရှိ။
ကိုယ့် ဘာသာတွေးချင်ရာတွေး တွေးချင်သလိုသာတွေး။ အပြင်မထွက်သေးသမျှ
အမြင်မတူသူတွေနဲ့ထိပ်တိုက်မရင်ဆိုင်ရသေးသမျှ အေးချမ်းနေဆဲ။
ဒါပေမယ့်တွေးထားသမျှ တချို့ တလေကို တခါတလေကျတော့ လည်း
တောတွင်းပျော် ပြီးခဲ့ နွေတုန်းက ဘုရားဖူးခရီးစဉ်တွေ လျှောက်လိုက်ပို့ နေခဲ့ ရတယ်။
တောတွင်းပျော်တို့ နိုင်ငံက သိကြတဲ့ အတိုင်း အပန်းဖြေလေ့ လာရေးခရီးတွေက ဘာသာရေးနဲ့ 
ဆက်စပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကပိုများပါတယ်။
ဂူတွေရှိရင် ဘုရားရှိတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ကျောက်ဂူကြီးတွေ ရေပူစမ်းတွေဟာလည်း
ဒေသနယ်မြေခံတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သာသနာနယ်တွေဖြစ်နေကြတော့ 
လေ့ လာရေးခရီး အပန်းဖြေခရီးတွေကို ဘုရားဖူးခရီးတွေလို့ ပဲ နာမည်တပ်ရပါတော့ မယ်။
ဒီလိုနာမည်ရှိ ထင်ရှားတဲ့ နေရာတွေ သွားလာနေရင်းက တွေ့ သမျှကြုံသမျှတွေဟာ အတွေးအဖြစ်
ဘာသာရေး နိုင်ငံရေးတွေ ဝေဖန်မိရင် အကဲဆတ် ဆတ်ဆတ်မခံ အတုံ့ ပြန်ခံရတတ်တာမို့ 
ကျနောတွေးမိတဲ့အတွေးလေးတွေ ဘေးကင်းပါစေပါခင်ဗျာ ..
ဒီလိုမျိုးဆိုရင် ပိုသင့် တော်လေးမလား ဆိုတဲ့အကြံပြုသဘောပါ။
အတွေး ( ၁ )
တောတွင်းပျော်တို့အရပ်ဒေသမှာ ဆရာတော်တစ်ပါးပါး နာမည်ကြီးထင်ရှားလာပြီဆိုရင်
တပြည့် ဒါယကာတွေက အဲဒီဆရာတော်ရှိတဲ့နေရာဒေသမှာ သာသနိကအဆောက်အအုံကြီးတွေ
အဲဒီဆရာတော်တွေ ပျံလွန်တော်မူတဲ့ အခါ သူ့ နယ်မြေမှာကျန်ရစ်ခဲ့ တဲ့အဆောက်အအုံတွေဟာ
ဆရာတော်မရှိတော့ တဲ့ နောက်ပိုင်း ထောက်ပံ့ မယ့်ဒါယကာတွေနည်းသွားတော့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အခက်အခဲဖြစ်ကုန်တော့ တယ်။
တစ်ချို့ ဆို ဆရာတော်ရှိစဉ်က ဆောက်လက်စ အဆောက်အဦးတွေဟာ လုပ်ငန်းတွေ တို့ လို့ တန်းလန်း တန့် သွားပြီး ရှေ့ ဆက်မရ နားလိုက်ကြရတာတွေ့ ရတယ်။
( လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ကုန်ကျမယ့်ဘတ်ဂျက်မပြည့် စုံဘဲ အလှူရငွေပေါ်မှီပြီး ဆောက်နေကြလို့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် )
ဆရာတော်တွေသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က ကြက်ပျံမကျ စည်ကားခဲ့ တဲ့ နေရာတွေဟာ ဆရာတော်တွေ
မရှိတော့တဲ့ နောက်ပိုင်း စည်ကားမှု အဆမတန်ကြီးကို ကျသွားတယ်။
ဒီလိုနေရာမျိုးကို စဉ်ဆက်မပြတ် စည်ကားစေချင်တာက တောတွင်းပျော်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ပါ။
ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်ကို အမှီပြုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် သာသနာပြုနယ်မြေတွေကို ဆရာတော်ကြီးတွေ မရှိတော့ တဲ့ နောက်ပိုင်း လူအများ
စဉ်ဆက်မပြတ် လာစေချင်ဖို့ က သာသနိကအဆောက်အအုံတွေချည်းသက်သက်သာ မဆောက်ဘဲ
လူအများအပန်းဖြေအနားယူနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးသင့် ပါတယ်။
သာသနာပြုရင်းကတဖက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းပေးရင်ကတဖက်ဖြစ်တဲ့ဗောဓိညောင်
ပင်တစ်ထောင် စိုက်တာမျိုးဆိုရင် အလွန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မျိုးလို့ မြင်ပါတယ်။
နောင်တစ်ချိန် ဒီအပင်တွေ စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ ဖြစ်လာခဲ့ ရင် အနီးအနားစပ်ချုပ် ကိုယ့် ပြည်တွင်းက
မဆိုထားနဲ့နိုင်ငံခြားကလူတွေတောင် တကူးတကလာပြီး လေ့ လာအနားယူ အပန်းမဖြေကြဘူးလို့ဘယ်သူတွေကများ ပြောနိုင်ကြပါမလဲ။
has written 40 post in this Website..
View all posts by တောတွင်းပျော် →	Blog
kai says: ဘာသာရေးနွယ်နေတဲ့..နေရာသစ်ကို.. ဘယ်နိုင်ဂျံဂါးသားကမှ အလည်မလာ(ချင်)ဘူး..။
အထူးသဖြင့် ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံက.. အလည်အပါတ်ဝါသနာပါကြတဲ့.. အဖြူတွေ..။
ဘယ်နှာ.. ဘာလုပ်နေမှန်းမသိ..။ အရုပ်တွေထိုင်ရှိခိုးနေတာပဲဆိုပြီး. စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာပေါ့..။
…. အပန်းဖြေလာလည်ပါတယ်ဆိုမှ.. ။
ဗမာတွေချမ်းသာလာလို့.. ဥရောပက..အလည်အပါတ်သွားမယ်ဆို.. . ချခ်ျအသစ်တွေ.. ဘုရားကျောင်းအသစ်တွေကိုဝိုင်းရံထားတဲ့.. ပန်းခြံတွေ.. ဂျီးဇက်..မယ်တော်မာရီရုပ်ထုတွေ.. လက်ဝါးကပ်တိုင်ရှိတဲ့နေရာတွေ.. သွားမလားဆိုတာ..။
အပန်းဖြေနေရာ.. ပန်းခြံ.. အသစ်ဆောက်မယ်ဆို.. ဘာသာရေးလုံးဝ(လုံးဝ) မနွယ်သင့်..
နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာကို လက်ဆင့်မကမ်း.. ဆက်ပြီးအသက်မသွင်းသင့်..။
တောတွင်းပျော် says: အလည်မလာ(ချင်)ဘူး။
လက်တွေ့ မှာတော့လာနေကြတာတွေ့ နေရတယ်။
သဂျီးတို့ နိုင်ငံတွေလိုတော့အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ လာတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ ။
ကျနော်ပြောတဲ့ နေရာတွေက မြေနေရာလွတ်ရှိတဲ့သာသနာပိုင်မြေတွေကိုပြောတာမို့သဂျီးပြောတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ လုံးဝ(လုံးဝ) မနွယ်သင့် ဆိုတာက
ကျနော့် အမြင်က အဆောက်အဦးကြီးတွေ ငွေဘုန်းဘောလအော
အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ သင့် တင့် လိုက်ညီမယ့်အနားယူရာ ပန်းခြံတွေပါ
ဆောက်ဖို့တွေးကြည့် တာပါ။
တချို့ နေရာတွေမှာဆို ထိုင်ဖို့ နေရာတောင်မရှိ။ ထိုင်ချင်ရင်
နေကပူပူ နားရမယ့်အရိပ်ကောင်းကောင်း အပင်တွေကရှားရှား အဖြစ်တွေ
ကြုံခဲ့ ရဖူးတာမို့ ။
kai says: အလည်မလာ(ချင်)ပါဘူး..
၂၀၁၆ ပထမ၄လပါတ်မှာတင်.. မြန်မာအိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ ထိုင်းကို… အလည်အပါတ်သွားသူ.. ၉.၀၄ မီလီယံ အယောက်ပေါင်းရှိပါတယ်..။
တိုးရစ်ဇင်တခုထဲက.. ထိုင်းတွေရတဲ့ဝင်ငွေဟာ.. မြန်မာတွေရှိသမျှ ဂက်စ်တွေထုတ်ရောင်း.. သယံဇာတတွေထုတ်ရောင်း.. ကျွန်းသစ်တွေထုတ်ရောင်းတာထက်များပါတယ်.။ မြန်မာ့ဂျီဒီပီ တနိုင်ငံလုံးထွက်ကုန်တ၀က်ကျော်ပါတယ်..။
ထိုင်းမှာ ဖာလုပ်နေတာ.. ဘယ်သူတွေလည်း.. မြန်မာတွေအသိဆုံးပါ..။ ဆိုတော့…
ဒီခေတ်က.. သဘာဝခေတ်..။ မိခင်သဘာဝတရားကို မြတ်နိုးလာကြတဲ့ခေတ်..။
သဘာဝကို သဘာဝအတိုင်း.. လူမထိပဲ(လူတို့မထိပဲ) ထားပါ…
အင်မတန်အရေးကြီးတာက.. ဘုရားတွေစေတီတွေလိုက်ဆောက်ပြီး.. သဘာဝကို မဖျက်စီးဖို့ပါ..။ ပန်းခြံတွေတောင်ဆောက်ဖို့မလိုပါ..။
သဘာဝကိုဖျက်ဆီး.. တောင်မြင့်မြင့်မြင့်တိုင်းစေတီတည်..ဆန်းဆန်းမြင်တိုင်း.. စေတီတည်.. ထိမ်းသိမ်းသူမရှိပစ်ထား.. အဲလိုလုပ်တာတွေကို.. ဘုရား(ဂေါတမဗုဒ္ဓ)လည်း.. ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့… မထင်ရေးချမထင်..။
မှတ်ချက်…။ ကိုရင့်ကိုဦးတည်ရေးနေတယ်ဆိုတာထက်.. စာဖတ်နေသူနတ်မင်းကြီးများကို တိုင်တည်နေတယ်သဘောထားပါနော..။
စိတ်တွေဘာတွေ ဆိုးတော်မမူကြေး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12062
Thint Aye Yeik says: ထိုင်းကမှ ပိုဆိုးသေး..
နတ်တွေ ရုပ်တုတွေ ကိုးကွယ်လိုက်သမှ သောက်သောက်လဲ…
.မြေကြီးထဲ ကြိုပြီး မြှုပ်ထားတဲ့ အရုပ်တွေကို အခုမှ တူးဖော်တွေ့သလိုလိုနဲ့.. လိမ်ညာ အလှူခံတာတွေတောင်… အခုရက်တွေထဲ ပေါ်နေလို့…သတိပေးနေရ… ဆိုတော့… ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တွေက…အဲ့ဒါတွေကိုမှ ပို စိတ်ဝင်စားတာပဲ..ဖြစ်ရမယ်။ ————-
Was this answer helpful?LikeDislike 383
တောတွင်းပျော် says: ဒီလို ပိုစ်မျိုးကို သဂျီး ဝင်ခွေ့ ရတာ သဘောကျတယ်ဆိုတာ
သိပြီးသား။ နောက်ထပ်တင်ဖို့ရှိသေး။
ခုတော့မမြင်ရတဲ့ပရိသ်သတ်တွေပိုအားပေးတဲ့ 
ခရီးသွားပိုစ်တွေဖက် ပြန်လှဲ့ လိုက်အုံးမယ်။
တောင်ပြေး မြောက်ပြေးပေါ့ သဂျီး။
ဝင်ခွေ့ တယ်သုံးလို့ 
စိတ်တွေဘာတွေ ဆိုးတော်မမူကြေး.. Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: အရှေ့အနောက်ပါ ထပ်တွေး
တောတွင်းပျော် says: အပေါ် အောက်လည်း ကျန်သေးတယ်